Imisebenzi ungayifumana ukuba uyazi iilwimi | IBezzia
Imisebenzi onokuyifumana ukuba uyazi iilwimi
UMaria Jose Roldan | | yokuPhila, Umfazi ophetheyo
Ukuba uyakwazi ukuthetha iilwimi ezahlukileyo unethamsanqa, unezibonelelo kunabanye abantu abangazaziyo iilwimi (nokuba banolwazi lweminye imisebenzi). Ukwazi iilwimi zasemzini kunokukunceda ukhule ngokomsebenzi ... nokuba uthetha isiFrentshi, isiNgesi, isiArabhu, isiTshayina ... Emva koko siza kukunika izimvo zemisebenzi onokuyenza.
1 Umntu ogadayo kwindiza
2 I-Kangaroo kwiinqanawa
4 Iingcali zorhwebo
5 Abaqeshi bamanye amazwe
6 Khangela umsebenzi wobomi bakho
Umntu ogadayo kwindiza
Awuyi kuhlawulwa kuphela ngokuhamba kwihlabathi, kodwa uya kufumana imali eyoneleyo yokuphila ubomi obungenamatyala- kuhlahlo-lwabiwo mali olucokisekileyo. Abasetyhini abazi iilwimi ezimbini nangaphezulu kwaye abangoyikiyo ukuhamba ngenqwelomoya baya kuwuthanda lo msebenzi. Kukho iinqwelomoya ezininzi onokukhetha kuzo kwezi ntsuku, ke zive ukhululekile ukubaxelela malunga nezakhono zakho.
Uyabathanda abantwana? Ngaba uphupha ngokuhamba ngesikhephe kodwa ungenamali? Amaphupha ayafezekiseka. Iphupha lakho alikho ngaphandle. Umgcini weenqanawa onokuba ngumsebenzi omkhulu kuwe. Nokuba ngumsebenzi wexesha lokuhamba ngenqanawa okanye wexesha elizeleyo, uya kufumana imali, uphumle, uphefumle umoya omtsha wolwandle, wonwabe nabantwana bezizwe ezahlukeneyo, udibane nabantu abatsha, kwaye uphucule izakhono zakho zokuthetha ulwimi lwangaphandle.
Iibhanki zamanye amazwe zihlala zikhangela abahlalutyi abalaziyo ulwimi lwangaphandle. Okukhona usazi iilwimi, kokukhona uya kufumana umsebenzi kwenye yeebhanki zamanye amazwe ezikhokelayo. Umvuzo uphezulu kakhulu ukuze uphile kamnandi kakhulu.
Xa usazi ulwimi lwangaphandle, unokusebenza njengengcali yebrand kwenye yeenkampani ezidumileyo, kubandakanya uGoogle. Umvuzo ungaphezulu kunokuba ubulindele. Nangona kunjalo, izakhono zakho kufuneka zibalasele. Umvuzo awaziwa, kodwa abanye baxela ukuba iingcali zorhwebo zifumana ukuya kuthi ga kwi-100.000 euros ngonyaka.
Abaqeshi bamanye amazwe
Kuxhomekeka ukuba usebenza phi, umvuzo wakho ungahluka. Ukongeza ekwazini ulwimi lwasemzini, kuya kufuneka ubenazo ezona zakhono zibalulekileyo zonxibelelwano kwaye ufunde ukwenza imeko engalindelekanga. Kuya kufuneka ulungiselele inani elikhulu leehambo zeshishini kwihlabathi liphela.
Khangela umsebenzi wobomi bakho
Ukongeza kule misebenzi, ngeelwimi unokukhetha eminye imisebenzi eya kukufanela: umfoti wezizwe ngezizwe, umguquleli, umbhali kwiimagazini zangaphandle ... Kukho iindlela ezininzi kwaye akukho mda kuwe!
Ukuba unethamsanqa lokwazi iilwimi, cinga nje ngendlela ofuna ukuzibona ngayo kwixesha elizayo ukuze usebenze kuyo. Nje ukuba uyicacise, kuya kufuneka ufumane indlela yokwenza ukuba kwenzeke. Fumanisa ukuba ungayenza njani ingqondo yakho emva koko uhambe! Isigqibo sokuphucula ikamva lakho siqala ngengcinga, kwaye ukuba loo ngcinga icacile kuwe ... Isigqibo siya kwenziwa!
Kuya kufuneka ufumane kuphela indlela yokufezekisa amaphupha akho. Uya kukwazi ukusebenzisa ulwazi lwakho ngeelwimi ukuziphucula kwaye usebenze kwinto oyithandayo kwaye uyithandayo, ulinde ntoni? Khangela indlela yokuphucula ikamva lakho ngeelwimi ozaziyo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Imisebenzi onokuyifumana ukuba uyazi iilwimi
Iingcebiso zokulala kwaye ulale ngcono